MUUQAAL Booliiska Dalka Spain Oo Xabsiga Dhigey Tababaraha Caanka Ah Ee Soomaaliyeed Jaamac Karaaciin Iyo Sababta Loo Xidhey | Xeegonews.com
Spain-(SLL)-Tababare Jaamac Aadan,oo loo yaqaano (Jaamac Karaaciin),ayaa lagu xidhey dalka Spain,tababarahayaa laliya orodyahanno caan ah,ayaa lagu xidhey maalintii shaley dalka Spain,tababarahan ayaa loo xidhey kaddib markii lagu sheegay adeegsiga daawooyinka jidhka xoojiya ee ay ciyaartooyadu isticmaalaan.
Booliiska dalka Spain ayaa waxaa la sheegay inay Xabsiga dhigeen Tababaraha Caanka ee Soomaaliyeed ee Ciyaaraha Fudud gaar ahaana Ciyaaraha Orodka Jaamac Maxamuud Aaden (Jaamac Karaaciin ) Ka dib markii ay ugu dhaceen Hoteel uu ka degenaa magaalada Sabadell ee dalkaas Spain.
Xadhiga Jaamac Karaaciin ayaa waxaa xaqiijiyey xidhiidhka orodka caalamka iyo waaxda ka hortagga daawooyinka jidhka xoojiya ee dalka Spain.Waxaana ay sheegeen in ay ciyaartooyada uu tababaro ay isticmaaleen daawooyinka jidhka xoojiya.
Tababare Jaamac Karaaciin ayaa tababare u ah gabadha haysta rikoodhka caalamiga ah ee orodka 1500Mitir,ee loo yaqaano Genzeebe Gibaaba,oo u dhalatey dalka Itoobiya,isla markaana ah gabadha ugu wanaagsan orodada caalamka ee sannadk walba la qiimeeyo,
Sidoo kale Jaamac Karaaciin ayaa laliya orodyahanno kale oo lafilayo inay billado ka soo hooyaan tartanka ciyaaraha olombikada ee sannadkan ka dhacaya magaalada Rio Dejenerio ee dalka Baraaziil.
Macallin Jaamac Karaaciin iyo Ciyaartooyada uu tababaro ayaan wali ka hadal xadhigaasi
WARIYE Sadam guray